Ukupheka kweeCulinary zeJapan zokutya ziyaziwa ngokwahlukileyo kwazo. Wonke umntu owake wazama ukumisa i-sushi okanye i-rolls, wamangaliswa ngokukhawuleza kwaye ixesha elide unokufumana okwaneleyo ukutya okuncinci.
Ngubani phakathi kwethu ongazange akuve malunga nokunyuka kwengqondo kweJapan? Yaye iirekhodi zabo kwixesha lokuphila lobomi bexesha elide liba yigama. Namhlanje sinethuba lokujoyina inkcubeko yaseJapan kunye nendlela yokuphila enempilo ngenxa yokutya kweJapan. Ukuze ujabulele ngokugqibeleleyo i-Landic ye-Sun of Sun rising, ufunde ukutya ukutya kweJapan ngokuchanekileyo!
Awunakuyidla iinqwelo ezininzi
Kutheni ungadla iincucu ezimbalwa zerayisi kunye nentonga yentlanzi? Konke malunga nenkcubeko yokutya. Ngenxa yokuba umntu uyadla iinqwelo zokuhamba ngokukhawuleza kwaye kwiincinci ezincinci, ukuvakalelwa kokuza kuza nangona udla. Emva koko, ulwazi olungena kwingqondo malunga nokungena kwisisu sokutya luza emva kokuqala kwesidlo kuphela ngowesixhenxe ukuya kumzuzu wesibhozo. Kule meko, akunakwenzeka ukutya ngokutya! Ngaba akusoloko esitshela abadli bezondlo - badle ngokukhawuleza baze bafune ukutya. Kwaye amaJapan aqikelele oku iminyaka eyinkulungwane edlulileyo.
Kukho mfihlelo enye. Ukuba uqaqa umqulu kwi-soy sauce, uze uyigubungele, ungabona ukuba i-rice lump sauce ihamba, kungekhona nje i-grains. Ukuba ungena kwisisu selayisi into efanayo. Ijusi yegastric ingena ngokukhawuleza kwisitya selayisi kwaye igqibe ngokupheleleyo. Ngokutya kweJapane, kuyinto yesiko ukusebenzisa imifuno ekhethiweyo. Ngoko ke, zonke izinto ezincedo kuzo zigcinwa ngokupheleleyo. Ukulula ukulula, akuyi kubangela imiphumo engathandekiyo, nakubantu abanezifo zesisu. Ukulungiselela izitya zaseJapan, inyama ikhethwe ngomxholo omncinane weethambo ezixhunyiwe. Ifilosofi yonke yokutya yaseJapan ijolise ekuphekeni ukutya okulula kakhulu kwisisu. Kungcono ukuxhamla, ukuzalisa umzimba ngamandla kunye nezondlo.
Imveliso elula kakhulu kuphela
Ngokutya kweJapane, akunakwenzeka ukusebenzisa iimveliso ezincinci. Zigwebe ngokwakho: ukuba intlanzi ayilunganga kakuhle, iya kuvelelwa kwangoku. Iipuphu azenzi naluphi na umsebenzi: iimveliso zikhishwe kwiqrijini-kwaye ngokukhawuleza etafileni. Umbuzo wendalo: luhlobo luni lweentlanzi esinokuthetha ngazo kwilizwe lethu, kuba ulwandle lude? Inyaniso kukuba kwiindlela zokupheka zokutya zaseJapan, abesifazana bangasebenzisa iintlanzi ezincinci. Yintoni enika inani leenzuzo. Okokuqala, intlanzi enjalo emva kokuphazamiseka ngokwempawu ezintle ngokuqhelekileyo ayifani neentlanzi. Okwesibini, ii-helminths ziyafa zingakapheli imizuzu eyi-10 kwiqondo lokushisa elingaphantsi kwe-27 ° C. Umngcipheko obanzi ubonisa impembelelo yeqondo lokushisa elingaphantsi - ngaphantsi kwe-47 ° C. Ngoko unokuphepha ngokutya-intlanzi eluhlaza ikhuselekile ngokupheleleyo. Enye enye imibala. Intlanzi iprotheni ecocekileyo, oko kuthetha ukuba ithambile. Kwaye loo mizuzu embalwa iya kudlula kumzuzu wokwenza i-sushi ekuqaleni kokutya kwayo, iindidi ezincinane zomoya zinganamathela kwiintlanzi. Ukuze i-microbes i-pathogenic ingabi neengcambu emzimbeni womntu, sidinga isabi (i-Japanese horseradish), i-soy sauce kunye ne-ginger. Bahlalutya umzimba - akukho mathambo emathumbu.
Ngokuqhelekileyo abantu baqala ukuphuhlisa ibha ye-sushi, ukuzama imiqulu. Oku kuqondakalayo - akulula kakhulu ukuqala ukutya intlanzi eluhlaza kwangoko. Kwaye kwimiqulu yonke encinane: irayisi, i-algae, neentlanzi. Emva koko, abaxhamli beJapan bavame ukutshintshela ku-sushi, kwaye emva koko baya kwi-sashimi. Ukuthanda ukutya kwaseJapane "ukusuka kuqala", sincoma ukuba sikhumbule ukuzibandakanya nesidlo saseJapane kwisidlo "inamba yegolide" - ngumqulu wokugquma. Jabulela ngisho nabalandeli bezidlo zaseYurophu.
Khumbula indlela yokumisa umsushi nge-soy sauce. Thatha iinqwelo zinye, qhaqa ngeentlanzi uze udibanise. Yiphatha umsila we-soy ngendlela efanayo netyuwa. Oko kukuthi, ukuba udinga ityuwa ikhukhamba, awuyi kubeka yonke imifuno kwi-saltcellar! Futhi unganqikazi ukucela iintonga zokuqeqesha - kufuneka ukhululekile ngexesha lokutya.
Lungisa irayisi ngokuchanekileyo
Kwiindlela ezininzi zokupheka kweJapan, irayisi isetyenziswe. Ngoko ke, siya kukuxelela indlela yokuyilungisa kakuhle-ngesiJapan. IJuni yokupheka irayisi ngendlela ekhethekileyo, ukuze ibe luncedo ngakumbi xa kuthelekiswa nelayisi eliqhelekileyo elincinci okanye amazambane ahlambulukileyo.
Khetha irayisi-i-grained-grained. Gcoba ngokugqibeleleyo imizuzu eyi-10 ngamanzi abandayo-ukwenza ukutya kuphele, kwaye amanzi acacile. Shiya irayisi ukuma imizuzu engama-30. Yipheke emanzini kwisilinganiselo se-1: 1. Thela ilayisi kumanzi abandayo. Ungasebenzisa intsimbi ukuze irayisi ingatshitshiswe ngokubheja ngaphantsi kwepese.
Vala isiqhekeza uze ubilise phezu kobushushu obuphezulu. Emva koko upheke imizuzu emi-2-3 ngomyinge, kunye nemizuzu eyi-15 - ngomlilo omncinci. Gcina irayisi ekupheleni kokubilisa imizuzu engama-15 phantsi kwesimbozo esivaliweyo. Musa ukususa! Ngaphantsi itholakala ngale ndlela yokupheka irayisi ephekwe ngokugqibeleleyo, kwaye ukusuka phezulu kuya kubakho i-half-baked. Kodwa musa ukwesaba. Ilayisi ephezulu "iza kufinyelela", ngelixa liza kuphazamiseka phantsi kwesiqwenga. Sebenzisa i-riam irayisi ukulungiselela ukutya okusanhlamvu, izitya zangasese, isaladi.
Ioliflower, izakhiwo eziwusizo
Ummeli uSergei Zhorin uxolisa uNikita Dzhigurda wokusebenzisa izidakamizwa zonyango nezengqondo
Ukuzifanisa ubuhle kumazwe ahlukeneyo
Indlela yokuqhuba umdlalo?
Ukuqagela kwiindawo zekhofi: iimpawu zokuqhafaza
Iimfihlelo zempilo nobuhle ezivela kuma-actresses